29 décembre 2018 - Midi Madagasikara
Day: 29 décembre 2018
Morafeno-Tsaratanàna : Vehivavy iray no nisy naka an-keriny, telopolo tapitrisa no takian’ny jiolahy
Vehivavy iray no nisy naka an-keriny tany amin’ny fokontany Morafeno, kaominina Betrandraka, disitrikan’i Tsaratanàna, faritra Betsiboka, ny alin’ny alarobia lasa teo. Fantatra izao, fa efa mandeha sahady ny fitakiam-bola ataon’ireo jiolahy ny amin’ny fianakavian’ity ramatoa ity, izay manodidina telopolo tapitrisa ariary eo. Na izany aza dia mampanahy mafy ny fianakaviany ny ain’ilay vehivavy. Tsy hay…
Nécrologie du 29 décembre 2018
Le projet de Loi n°054/2017 du 28 décembre 2017 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a été adopté avec amendements au Sénat, en séance plénière, dirigée par le Président du Sénat par intérim Randriambololona Mananjara, vendredi dernier. Ce projet de loi renforce le cadre juridique et institutionnel de…
Madiroambo-Tsararano : Nifandona ny zandary sy ny dahalo, roa lavon’ny bala
Dahalo telo no lavon’ny balan’ny mpitandro ny filaminana, moara maro no azo. Ireo no vokatry ny fifampitifirana nisy teo amin’ny zandary nanao sakan-dalana sy ny malaso avy nangalatra omby. Tao amin’ny tanàna antsoina hoe Madiroambo, fokontany Bevilany, kaominina Tsararano, disitrikan’i Maevatanàna, no nitrangan’izany ny asabotsy 23 desambra lasa teo, tokony ho tamin’ny fito ora hariva…
Le Bouliste Ialatsara Club Ambohimahasoa a encore fait parler de lui en qualifiant une des ses équipes en phase finale de la Passion Pétanque Tour 2018 qui va se tenir à Ville-de-Fréjus du 17 et 18 janvier prochains. Le BIC va encore se trouver au devant de la scène mondiale de la pétanque à l’occasion…
Fikambanana « VITAL Fampandrosoana » : Tsy nanadino ireo zanaky ny mpikambana
Isan-taona dia tsy manadino ny zanaky ny mpikambana ao aminy ny fikambanana “Vital Fampandrosoana” izay tarihan’Atoa Mananjara James Antonio. Ho famalifaliana sy ho fampitoviana ny zanaky ny mpikambana amin’ny mpiara-monina aminy, izay avy amin’ny fianakaviana sahirana ny ankamaroany, dia nanolotra fanomezana samy hafa toy ny kilalao ireo ankizy sy zaza miisa 80 latsaky ny 12…
Hain-trano mahatsiravina no nitranga omaly antoandro tetsy Alarobia Amboniloha. Trano lehibe iray misy rihana roa no kila hotohoton’ny afo. Aina tsy manan-tsiny iray ary fananana nohariana tam-polon-taonany maro no nafoy tao anatin’ny adim-pamantaranandro vitsy monja. Amin’ny 12 ora sy sasany antoandro. Manao tanik’orana ny andro ary mingaingaina izay tsy izy. Tamin’izay indrindra no nisahotaka iny…
Anjozorobe : Natao takalon’aina dia novonoina avy eo
Nentina niala kely teo amin’ilay tanàna dia notifirina nony avy eo. Izany no nitranga tao amin’ny tanàna antsoina hoe Marotsipoy, ao Anjozorobe. Tompon’omby izy io ary rehefa voaroba ny tranony ka nalaina ireo biby fiompy dia mbola nentina natao takalon’aina koa ny tenany. Ny alakamisy teo no nitranga ny fanafihana tao amin’ny tanàna izay voalaza…
L’espoir d’un samedi : Sans débordement
Ce samedi est un jour qui recèle beaucoup d’inconnus. La manifestation organisée par le KMMR va peut-être( marquer le début d’une grande crise postélectorale ; Cette crainte est cependant balayée d’un revers de la main par les « zanak’i Dada » qui s’érigent en défenseurs de la vérité et de la justice. Le rassemblement d’aujourd’hui va avoir lieu…
Les employés de la commune urbaine d’Antananarivo sont particulièrement gâtés par le maire Lalao Ravalomanana. Hier, ils ont reçu des vivres dont du riz et de l’huile qui leur permettent de passer les fêtes de fin d’année dans la sérénité. La distribution de ces vivres s’est tenue au gymnase couvert de Mahamasina où la première…